Shirka Machadka Hiratage oo Maanta si rasmi ah u furmaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal waxaa lagu wadaa inuu maanta ka furmo shirka madasha aragti wadaagga ee uu oo diyaariyey Machadka Hiratage, kaas oo uu shalay ku yimid dib u dhac.
Shirweynahan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qeyb-galaya, Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka, guddoonka labada aqal,xubno ka mid ah musharraxiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka.
Madasha aragti wadaagga oo qaadan doonto saddex cisho ayaa waxaa sanadkan diirada lagu saarayaa sidee 2025 looga bixi karaa Kumeel gaarnimada iska socota, si dalka u helo Dastuur dhameystiran, doorasho qof iyo cod iyo nidaam federaal oo shaqeynaya.
Sidoo kale madaxda ka qeyb-galeysa shirkan sanadlaha ah oo isugu jiroi mucaarad iyo muxaafad ayaa xalay yeeshay kulamo hordhac ah oo isku wareysteen dhinacyadaasi.
Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale adkeeyey ammaanka Magaalada Garoowe oo la ciir-ciireysa mas’uuliyiin kala duwan oo ka qeyb-galeysa shirkaasi oo si gaar ah uga dhici doono Xarunta Jaamacadda PUS ee Garoowe.
Shalay ayaa lagu waday inuu si rasmi ah u furmo Shirka madasha aragti wadaagga ee uu oo diyaariyey Machadka Hiratage, hayeeshee waxaa uu baaqday, sababo la xiriira inuu buuxsamay howlkii loogu tala-galay in lagu qabto Shirkaas.
Madaxweynaha Jubbaland oo kulan gaar ah la yeeshay Guddoomiye Mursal